Laptop ကို၏ထူးအိမ်သင်အမှတ်တရသတ္တုကာစ် China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:ထူးအိမ်သင်သတ္တုကာစ်,မြင့်မားသော Precision အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းရှဲလ်,semi Solid သေကာစ်လုပ်ငန်းစဉ်
Home > ထုတ်ကုန်များ > မဂ္ဂနီစီယမ် Die ကာစ် > semi Solid သေကာစ် > Laptop ကို၏ထူးအိမ်သင်အမှတ်တရသတ္တုကာစ်
ကြောင့်အီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်များစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်, စျေးကွက် ပို. ပို. မြင့်မားဘက်ပေါင်းစုံ, ပါးလွှာ, miniaturized နှင့်အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးထုတ်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်လာနေသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထူးအိမ်သင်-ရံနှငျ့ပိ Casting သတ္တိလည်းရှိတယ်။ semi အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းရာတွင်အသုံးပြုလျက်, သတ္တုများပုံသွန်း၏နံရံအထူ 0.3 ~ 1.0mm အထိဖြစ်ပြီး, ခွန်အား, တောင့်တင်းခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်တိုက်မှုနိုင်စွမ်းထိန်းသိမ်းထားကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက Ultra-ပါးလွှာ, အစွန်းရောက်အလင်းနှင့်သေးသေးလေးထုတ်ကုန်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုရန်အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်။ မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာများ, မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများဖြင့်ကိုယ်စားပြုအဆိုပါ 3C ထုတ်ကုန်, အလငျးကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ပါးလွှာသောအတိုများနှင့်အသေးစားလမ်းညွန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူမဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်၏လျှောက်လွှာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။